Fambolena sy fiompiana : ilaina ny tanora mahafehy ny tontolo ambanivohitra | NewsMada
Fambolena sy fiompiana : ilaina ny tanora mahafehy ny tontolo ambanivohitra
Namarana ny atrikasa fakan-kevitra amin’ireo mpandraharaha hahafahana mandrafitra fandaharam-pampiofanana vaovao hatolotra ny tanora (Vap EPT/EFTP) ny Unesco tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity.
Niompana indrindra tamin’ny sehatry ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny fakan-kevitra natao nandritra io atrikasa farany io. Anisan’ny lalam-piofanana tokony hanentanana ny tanora ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay mbola fototry ny fiainan’ny Malagasy.
Raha ny eto Madagasaikara, mbola mifototra amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan’ny mponina. Famokarana miitatra amin’ny famatsiana ny tanàn-dehibe sy ny fanondranana mihitsy aza no tanjona.
Anisan’ny efa nanaovana fakan-kevitra ny sehatry ny zaitra, fizahantany, asa vaventy, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany….
Sehatr’asa takin’ny firenena ary ilana tanora betsaka ireo nanaovana fakan-kevitra manokana ireo. Niantsehatra ny mpandraharaha sy ireo efa matihanina nanolo-kevitra hanatsarana ny fandaharam-pampianarana sy fiofanana hamaly avy hatrany ny filan’ny orinasa ary hamoaka tanora mamokatra avy hatrany.
Niarahana tamin’ny minisiteran’ny Asa sy ny fampianarana tekinika ary ny fanofanana momba ny asa, minisitera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana ary notohanan’ny Unesco ireo fakan-kevitra rehetra natao tamin’ireo sehatr’asa rehetra ireo.